မိန်းမအင်္ဂါထဲ သခွားသီးတစ်နေတာ ထုတ်မရလို့ ဆေးရုံပြခဲ့ရတဲ့တာကို ချော်လဲသွားလို့ပါလို့ပြောတဲ့ အမျိုးသမီး... - APANNPYAY
Home / ထူးဆန်းထွေလာ / နိုင်​ငံတကာသတင်း / မိန်းမအင်္ဂါထဲ သခွားသီးတစ်နေတာ ထုတ်မရလို့ ဆေးရုံပြခဲ့ရတဲ့တာကို ချော်လဲသွားလို့ပါလို့ပြောတဲ့ အမျိုးသမီး...
မိန်းမအင်္ဂါထဲ သခွားသီးတစ်နေတာ ထုတ်မရလို့ ဆေးရုံပြခဲ့ရတဲ့တာကို ချော်လဲသွားလို့ပါလို့ပြောတဲ့ အမျိုးသမီး...
Apann Pyay 5:12 PM ထူးဆန်းထွေလာ , နိုင်​ငံတကာသတင်း Edit
အသက် ၅၁ နှစ်အရွယ် ထိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး သူမရဲ့ သားအိမ်လမ်းကြောင်းမှာ သခွားသီး တစ်နေတဲ့အတွက် ဆေးရုံသို့ အမြန်ပို့ကာဆရာဝန်တွေ ဆွဲထုတ်ပေးခဲ့ရသည့်သတင်းသည် လတ်တလော အွန်လိုင်းတွင် လူပြောအများဆုံး သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေသည်။
သခွားသီး အထဲရောက်နေခဲ့တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး သူမက ဆရာဝန်တွေကို ဖြေရှင်းချက်ပေးရာမှာ သခွးသီးပေါ်ကို သူမချော်လဲကျခဲ့တဲ့အတွက် အခုလို ဖြစ်သွားရတယ်လို့ ကျိန်တွယ်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာအရ အမျိုးသမီး၏ အမည်ကို ထုတ်ဖော်မပြောထားပေးမယ့် သခွားသီးပေါ် လဲကျလို့ ဆိုတဲ့ ကိစ္စကိုတော့ ဘယ်သူကမှ အယုံအကြည်မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒီအကြောင်းကို အွန်လိုင်းမှာ ရယ်ပွဲဖွဲ့ ပြောဆိုဝေဖန်လျှက်ရှိပါတယ်။ သူမဟာ သခွားသီးပေါ်လဲကျခဲ့လို့ သခွားသီး အထဲဝင်သွားခဲ့တယ်လို့ သင်ရောယုံကြည်ပါသလား..? ထင်မြင်ချက်လေးတွေ ရေးခဲ့ပါဦး..။
အသကျ ၅၁ နှဈအရှယျ ထိုငျးအမြိုးသမီးတဈဦး သူမရဲ့ သားအိမျလမျးကွောငျးမှာ သခှားသီး တဈနတေဲ့အတှကျ ဆေးရုံသို့ အမွနျပို့ကာဆရာဝနျတှေ ဆှဲထုတျပေးခဲ့ရသညျ့သတငျးသညျ လတျတလော အှနျလိုငျးတှငျ လူပွောအမြားဆုံး သတငျးတဈပုဒျဖွဈနသေညျ။
သခှားသီး အထဲရောကျနခေဲ့တဲ့ ကိစ်စနဲ့ ပကျသကျပွီး သူမက ဆရာဝနျတှကေို ဖွရှေငျးခကျြပေးရာမှာ သခှးသီးပျေါကို သူမခြျောလဲကခြဲ့တဲ့အတှကျ အခုလို ဖွဈသှားရတယျလို့ ကြိနျတှယျပွီးပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ သိက်ခာပိုငျးဆိုငျရာအရ အမြိုးသမီး၏ အမညျကို ထုတျဖျောမပွောထားပေးမယျ့ သခှားသီးပျေါ လဲကလြို့ ဆိုတဲ့ ကိစ်စကိုတော့ ဘယျသူကမှ အယုံအကွညျမရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒီအကွောငျးကို အှနျလိုငျးမှာ ရယျပှဲဖှဲ့ ပွောဆိုဝဖေနျလြှကျရှိပါတယျ။ သူမဟာ သခှားသီးပျေါလဲကခြဲ့လို့ သခှားသီး အထဲဝငျသှားခဲ့တယျလို့ သငျရောယုံကွညျပါသလား..? ထငျမွငျခကျြလေးတှေ ရေးခဲ့ပါဦး..။